R-4602-T - Maviri mune Imwe Rollator / Yekufambisa Sachigaro 8 Inch Mavhiri
Vaviri mune rimwe rollator R-4602. Wana zvakanakisa zvepasirese nyika. Kuva nemufambi uye rollator zvinongoita zvirinani kana iwe ukabatanidza Ultra mwenje zvinhu zvekuwedzera pamwe nekuwedzera basa yechigaro. Aya maviri mune rimwe rollator ikozvino anotendera iwe kuti ugare kune chero kuzorora kana kuita sechifambisa chewiricheya. Tora iyo chero kwaungade kuenda. Iva neshamwari yekukusundidzira kana kungova neyakareruka yekugona kuzorora uye kunakidzwa nehupenyu uchienda usina kunetseka kana iwe uchigona kuve nenzvimbo yakanaka yekugara. Netsoka dzakasanganiswa dzinozorora dzino flip kumusoro uye kubuda munzira, iwe unenge uchisimuka uye uchifamba mune yakagadzika rollator isina chete Ultra mwenje uremu mupfungwa asiwo nehombodo inotakura pasi pechigaro uye yakajairwa Push kukiya brake system. Vimba chete Karman uye ndeapi magadzirirwo anomira muyedzo wenguva mune mhando uye hunyanzvi.
R-4602-T - 21 lbs huwandu
SKU: R-4602-T Category: Vanotenderera Tags: 4 mavhiri, 4602, r-4602
A rollator Zvakare iri Transporter
Yakapetwa - Nyore Kuisa MuTrunk
Inogadziriswa Bata Kureba w / Chigaro Chakapfava
Tsoka dzekutakura Nyore
8, Flat Mahara Casters
Chimiro Ruvara: Metallic Burgundy kana Bhuruu
Chigaro Kureba 13 padiki.
Kureba Kumashure 12 inch.
Kunopindirana Kureba 35-39 padiki.
Chiremera Chechigadzirwa 21 lb.
Kutumira Kukura 24.5, L x 33.2, H x 9.2, W
R-4602 - Vaviri mune Imwe rollator UPC #
25 × 10 × 34 mukati